မီးဖိုချောင်ထဲဝင်သော Faucets သည် Brushed Nickel ကိုဆွဲချသည်
ပင်မစာမျက်နှာ / မီးဖိုချောင် faucets / Faucets Down ဆွဲ / WOWOW မီးဖိုချောင်ထဲမှရေကန်များနစ်မြုပ်ထားသောနီကယ်
WOWOW မီးဖိုချောင်တွင်ရေနစ်နေသော Faucets သည် Brushed Nickel ကိုဆွဲချသည်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 5.005ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 40 ဖောက်သည် ratings
တစ်ခုတည်းသောအပေါက်မီးဖိုချောင် faucet high arc တွင်အောက်ပါအားသာချက်များရှိသည် - ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်ခြင်း၊ လမ်းကြောင်းအားလုံးတွင်သေသပ်သောထောင့်မပါဘဲပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သန့်ရှင်းမှု၊
သငျသညျအလိုတော်မှာအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲလွယ်သောသံမဏိကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရေပိုက်တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း။
ဆွဲထုတ်မှုန်ရေမွှားနှင့်အတူ Ktchen ထိပုတ်ပါ 2310700
သင်၏မီးဖိုချောင်၏အရေးအကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုကဘာလဲ။ ဤပစ္စည်းကိုတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုသောကြောင့်မီးဖိုချောင်ထဲရှိလူများစွာသည်ဖြေကြသည်။ အပြင်မီးဖိုချောင်ဘုံဘိုင်ကိုမကြာခဏမီးဖိုချောင်၏အဓိကအချက်အလက်များအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။ မည်သို့ပင်သင်၏မီးဖိုချောင်၏စတိုင်။ အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်မီးဖိုချောင်ထိပုတ်ခြင်းကြောင့်လူတိုင်း၏အာရုံကိုသဘာဝကျစေသည်။ သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းအတွက်မှန်ကန်သောမီးဖိုချောင်သုံးပုတ်နှိပ်ရန်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်။ မှားယွင်းသောရွေးချယ်မှုသည်သင်၏မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းမှဟန်ချက်ညီမှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်အသုံးချနိုင်မှုအရသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်မကိုက်ညီသည့်မီးဖိုချောင်သုံးပုတ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ အရည်အသွေးသည်သတိမပြုမိဘဲမနေပါ။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောမီးဖိုချောင်ထိပုတ်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊
သို့သော်သင်သည်အရည်အသွေးကိုမည်သို့သတိပြုမိပါသနည်း။ သင်မီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ၏အရည်အသွေးသည်ပျှမ်းမျှထက်မြင့်မားသည်၊ မဟုတ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကိုသုံးသင့်သည်။ မီးဖိုချောင်ထိပုတ်ထုတ်လုပ်သူကသင့်အားပေးသောအာမခံကာလနှင့်သင်အလွယ်တကူသိနိုင်သည်။ တစ်နှစ်အာမခံပေးသူတစ် ဦး သည်နှစ်နှစ်လောက်အကြာတွင်ပြproblemsနာအချို့ကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်အတွက်အာမခံသက်တမ်းပိုရှည်ရန်မလိုချင်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ် ဦး ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
၅ နှစ်အာမခံကာလသည်၎င်း၏ကုန်ပစ္စည်းကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးထိုနှစ်များအတွင်း၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တာ ၀ န်ယူလိုသည်မှာသေချာသည်။ လူတွေကမေးနိုင်တယ်၊ ဘာကြောင့် ၁၀ နှစ်အာမခံမရလဲ ကောင်းပြီ, မီးဖိုချောင်ထိပုတ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း၎င်း၏အသုံးပြုမှု, ၎င်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ရေအရည်အသွေးပေါ်မူတည်သည်။ မီးဖိုချောင်ကိုထိပုတ်ပါက ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာလျှင်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်ရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကောင်းမွန်စေသည့်ကောင်းမွန်သောရေကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
လူအတော်များများသည်အခြားမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ခြင်းထက်ရေမှုန်ရေမွှားမီးဖိုချောင်ထဲမှဆွဲထုတ်ခြင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းကသင်၏မီးဖိုချောင်ထဲ၌ရှိသောမည်သည့်နေရာကိုမဆိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်၏မီးဖိုချောင်ကိုအခြားမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ရေပိုက်နှင့်အတူသင်တစ် ဦး ချင်းစီအခြမ်းမှ 32 လက်မနှင့်သင်၏အလွယ်တကူတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်မီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါကသင်မည်သည့်အခါမျှဤအကွာအဝေးကိုရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် ပို၍ အဆင်မပြေပါ။ ဒီဆွဲထုတ်သောရေမှုန်ရေမွှားမီးဖိုချောင်ကိုအသာပုတ်ပါကသင်၏မီးဖိုချောင်ကိုမျက်တောင်ခတ်လျက်သန့်ရှင်းစေလိမ့်မည်။
ပေါင်းစည်းထားသောဆွဲထုတ်မှုန်ရေမွှားမီးဖိုချောင်ထိပုတ်မှု၏ကြီးမားသောအားသာချက်မှာ ၄ င်းသည်ကြော့ရှင်းပြီးသင် 4'11 နီးပါးရှိသောရေပိုက်ကိုရရှိရန်သင်သတိမထားမိခြင်းဖြစ်သည်။ WOWOW ၏ဤမှုတ်ထုတ်သည့်မီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါပုံမှန်မီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ သင်ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်လျှင်ပင်၊ ပုံမှန်မီးဖိုချောင်ထိတွေ့မှုနှင့်ခြားနားချက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်သည်ဤမှုတ်လိမ်းသော ဦး ခေါင်းကိုဆွဲယူသောအခါလေမှုတ်စက်မီးဖိုချောင်အသာပုတ်ပါ၊ သင်၏လက်၌ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်သောရေပိုက်ရှိကြောင်းရုတ်တရက်သတိပြုမိသည်။ တဖန်သင်တို့ရဲ့အရှည်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအံ့အားသင့်လိမ့်မည်! ရေပိုက်ကိုသုံးပြီးနောက်ဘာမျှမဖြစ်သကဲ့သို့, က၎င်း၏မူလအနေအထားသို့အလိုအလျောက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း။ ယင်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရေပိုက်နှင့်တန်ပြန်နှင့်အတူဤချောမွေ့ပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်စွမ်းအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်, သင်ချက်ချင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သူသည်မီးဖိုချောင် faucet ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုက်? ဘယ်သူမှခန့်မှန်းလို့မရဘူး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသို့သော်အမှန်တကယ်ထက်ပိုမိုလေးနက်အသံ။ မီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါကသင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရေးကြီးဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကောင်းစွာသန့်ရှင်းရေးဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှချက်ပြုတ်ပြီးနောက်အမှိုက်ကိုဖယ်ရှားသင့်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်မီးဖိုချောင်၏မျက်နှာပြင်ကိုအကောင်းဆုံးပုံသဏ္inာန်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒီလိုပဲမင်းရဲ့မီးဖိုချောင်ရေခဲအိုးကအသစ်စက်စက်ဖြစ်နေဆဲပဲ။ ထို့အပြင်မီးဖိုချောင်ကိုအသာပုတ်မှုန်ရေမွှား၏ခေါင်းမှခဲယဉ်းသောရေဆိုးများကိုဖယ်ရှားရန်အရေးကြီးသည်။ အထူးသဖြင့်သင်ရေသည်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုခက်ခဲသည့်နေရာတွင်နေထိုင်သောအခါ။ ဆိုလိုတာကတော့ရေထဲမှာမြေဖြူတွေသုံးတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ အသုံးပြုမှုတစ်ခုချင်းစီအပြီးမီးဖိုချောင်ထဲ၌ကျန်ရှိနေသေးသည်။ သင်မကြာခဏဤသန့်ရှင်းရေးနေသမျှကာလပတ်လုံးဒါကပြnoနာမရှိပါဘူး။
သင်ထိုသို့မပြုလုပ်ပါကမြေဖြူတွေသုံးပြီးအဆက်မပြတ်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်အဆို့ရှင်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်ရေမှုတ်ဆေးမီးဖိုချောင်သုံးခလုတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါသင်၏မီးဖိုချောင်ကိုထိပုတ်ပါ။ ဤသည်ကသင်၏ထုတ်ယူမှုန်ရေမွှားမီးဖိုချောင်ကိုထိပုတ်ပါတစ်သက်တာမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာမခံဖို့ကျန်ကြွင်းအားလုံးအလွယ်တကူနဲ့စနစ်တကျဖယ်ရှားပစ်ရန်သေချာစေသည်။
လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အပြင်ရေမှုတ်သောမီးဖိုချောင်ထိပုတ်မှုကိုလည်းပုံစံပြုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မြင့်မားသော arc ပုံသဏ္youာန်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကြော့ရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျသောနေရာကိုပေးသည်။ Brushed nickel finish သည်မီးဖိုချောင်မှထွက်သောမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းလေးကိုအံ့ style ဖွယ်ကောင်းသောပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်စားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဟိုတယ်တွင်မဆိုသင့်တော်သော်လည်းသင်၏မီးဖိုချောင်တွင်သင်ရှာဖွေနေသည့်မြင့်မားမှုကိုပေးလိမ့်မည်။
လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကြည့်လျှင်ဒီရေမှုန်ရေမွှားမီးဖိုချောင်ခလုတ်သည်သင်၏မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေးတွင်သင်ရှာဖွေနေသည့်သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်ရေလုပ်ဆောင်ချက်သုံးခုပါရှိသည်။ ရေမှုန်ရေမွှားခေါင်းပေါ်ရှိအထူးခလုတ်ဖြင့်ပင်သင်ခဏရပ်နားနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်ရေကိုစက္ကန့်မျှသာကြာအောင်ကိုင်ထားသည့်အခါလီဗာကိုမထိရန်လိုအပ်သည်။ ရေအပူချိန်နှင့်ရေဖိအားကိုထိန်းညှိရန်လီဗာကိုတစ်ကိုယ်တည်းလည်ပတ်နိုင်သည်။ ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်လည်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းလည်ပတ်မှုနှင့်အတူသင်နေရာအားလုံးသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။
ဒီအမြင့်ဆုံးမှုတ်ထုတ်မှုန်ရေမွှားမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါအရည်အသွေးမြင့်မားသောကြေးဝါပစ္စည်းများနှင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၅ နှစ်အာမခံကာလနှင့်ရက်ပေါင်း ၉၀ ငွေပြန်အမ်းမည့်အာမခံကို WOWOW ကသင့်အားယုံကြည်စိတ်ချစွာပေးသည်။ ငါတို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကမင်းကိုဒီဆွဲထုတ်တဲ့ရေမှုန်ရေမွှားမီးဖိုချောင်သုံးခလုတ်ဖြင့်သင်ကမ်းလှမ်းတဲ့ငွေတန်ဖိုးကိုသေချာပေါက်လက်ခံလိမ့်မယ်။
မည်သည့်မီးဖိုချောင်ကိုမဆို wow-factor ပေးသည်
SKU: 2310700 Categories: မီးဖိုချောင် faucets, Faucets Down ဆွဲ Tags: ဆွဲထုတ်, လူပျိုလက်ကိုင်, ရေမှုံပက်
1x WOWOW မီးဖိုချောင် Faucet (၅၀ စင်တီမီတာရေနှင့်ရေအေးများ၊ ၁.၅ မီတာမြင့်သောအပူချိန်ဖိအားခံနိုင်ရည် PEX ရေပိုက်)၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - ရော်ဘာ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ အခွံမာ၊ ၁x သုံးစွဲသူလက်စွဲ၊ ၁x အလေးချိန်၊ ၁x ၈ လက်မကုန်းပတ်
ကို C *** ဋ2020-07-01
ငါဒီထုတ်ကုန်နှင့်အတူပျော်ရွှင်စွာအံ့သြသွားတယ်။ ဒီဟာကတရုတ်ကိုလုပ်တာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ငါအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ် faucet အခြားအမည်ကိုအမှတ်တံဆိပ် faucet အစားထိုးခြင်းနှင့် finish ကိုပယ်ကွဲအက်ကြောင့်2နှစ်အတွင်းလက်ကိုင်ကိုအစားထိုးခဲ့ရသည်။ နောက်တစ်နှစ်အကြာတွင်လက်ကိုင်သည်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီပိုက်ဆံအတွက်ငါလုပ်တာထက် ၄ ဆလောက်ပေးရမယ့်အစားငါဒီဟာကိုဝယ်ယူမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါသုတေသနအတွက်အချိန်ပိုလိုချင်တယ်၊ ၎င်းသည်ရောက်ရှိလာသောအခါကျွန်ုပ်၏တည်ဆောက်ရေးအရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်၏နာမည်တံဆိပ်တစ်ခု၏တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးထက်မနည်းသောကြောင့်တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးကိုအံ့အားသင့်ခဲ့သည်။ ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေကတော်တော်လေးကိုစံနမူနာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အစားထိုးပစ္စည်းတွေ ၀ ယ်တာဟာရွေးချယ်စရာတစ်ခုလို့မထင်ပါဘူး။ သူကပြောနေတာကတော့ဒီစျေးနှုန်းအတွက်ကတော့အဲဒါဟာကျိုးပဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒါကတစ်ခါသုံးရွေးစရာတစ်ခုလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကတစ်နှစ်လောက်ကြာရင်ငါပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်။ ဝေးလေကောင်းလေ။ ၎င်းသည်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိပဲအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအဆင်ပြေလွယ်ကူသောမည်သူမဆိုအတွက်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ပုံမှန် / လွယ်ကူသည်။ တပ်ဆင်ခြင်းသည်တစ်နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအချိန်အများစုမှာနစ်မြုပ်နေစဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး faucet အဟောင်းကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၌၎င်းကို ၂ လခန့်ကြာခဲ့ပြီးရေမှုန်ရေမွှားသည်လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ဒါကဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ ဦး ခေါင်းဖြစ်လို့အဲဒါကို faucet လက်မောင်းကိုလုံခြုံအောင်ထားတဲ့အခါသင့်တော်တဲ့နေရာချထားမှုကိုသေချာအောင်ရေပိုက်ထဲထပ်ထည့်တယ်။ ဒါကအကူအညီဖြစ်ခြင်း, အလေးချိန်ချောနေခဲ့တယ်သောငါ့ယခင် faucet ထက်အများကြီးပိုကောင်း, ကောင်းစွာလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် spayer head တွင် magnetized sprayer မရှိ၍ အလေးချိန်သည်၎င်းကိုလုံခြုံစေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီစျေးနှုန်းအချက်အတွက်တည်ဆောက်အရည်အသွေး, အလှကုန်နှင့် features တွေနှင့်အတူငါဝမ်းသာတယ်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပဲ။ ကျွန်တော်အကြံပြုလိမ့်မယ်
ငါ့တည်ဆောက်သူ Moen faucet (ဒေါ်လာ ၂၆၀) ကို WOWOW မီးဖိုချောင် Faucet တစ်ခုတည်းကိုင်တွယ်ပြီးမီးဖိုချောင်ထဲမှ Sink Faucets ကိုအစားထိုးလိုက်သည်။ Moen သည် (အိမ်သစ်) အသစ်ဖြစ်သော်လည်းအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။
WOWOW Faucet သည်ကြမ်းတမ်းပြီးချောမွေ့။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ WOWOW သည် Moen ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းသည်ပိုမိုလုံခြုံပြီးချောင်မများပါ။
ငါမီးဖိုချောင်စုပ်အခါတိုင်းအပူချိန်ရရှိရန်နှင့်ငါ့အကြိုက်စီးဆင်းရန်4လရုန်းကန်ပြီးနောက်, ငါကတကယ်တော့ရေအပူချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ချောမွေ့ခြင်းနှင့်တိကျသောလက်ကိုင်နှင့်အတူညာဘက်စီးဆင်းရန်မည်မျှလွယ်ကူသောမှာပြုံး။
K သည် *** ဎ2020-07-05
Wowow Faucet သည်အလျင်အမြန်ရောက်ရှိလာပြီးဘာမျှမခြစ်ရာ၊ အဆိုပါ faucet လှပသော! ခေတ်မီပြီးကြံ့ခိုင်ပါတယ် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်အလွန်ကြီးစွာသောတန်ဖိုးကို။ တပ်ဆင်ခြင်းသည်လွယ်ကူပြီး ၃ ပေါက်တွင်းပါသည့်ရေပိုက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နစ်မြုပ်နေသောဟောင်းနွမ်းသောနေရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဒီ faucet ကငါတို့ကိုပိုပြီးအားကောင်းတဲ့ရေဖိအားပေးတယ်။ ငါသာချစ်ကြတယ် ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေချိုးခန်းများအတွက်အပို faucets ဝယ်ယူလိမ့်မည်သူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးအဖြစ်ဒီကုမ္ပဏီကိုပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။
အို *** t ကို2020-07-07
ငါတို့အဟောင်းကသေးလွန်းပြီးအဆင်မပြေဘူး ဒါကမီးဖိုချောင် faucet ကြောင့် ဦး သေဆုံး ငါဒီ faucet သည်အခြားလူသိများတဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အများစုထက်စျေးသက်သက်သာသာရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ အထုပ်တစ်ထုပ်လုံးနှင့်ညွှန်ကြားချက်များပါ ၀ င်သည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးသင်အလွန်စိတ်ရှည်စွာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ရေမှုန်ရေမွှားခေါင်းကိုစုပ်အောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသောအလေးချိန်အားဖြင့်နေရာယူထားသည်။ အဆိုပါရေဖိအားတည်ငြိမ်ချောမွေ့သည်။ အဲဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရိုးရှင်းပါတယ်။ အရပ်ရှည်တယ် ငါတို့အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းပဲ အရာအားလုံးကိုဆေးကြောရန်အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။
ကျွန်မအသက် ၆၄ နှစ်ရှိပြီ၊ လည်ပင်းခွဲစိတ်မှု ၂ ခုလုပ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်ကက်ဘိနက်အောက်မှာရှိနေရတာဟာကျွန်တော့်အတွက်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့အရင်ရေကြောင်းသွားတဲ့အခါဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးခဲ့ဘူး။ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီတတ်နိုင်သမျှအတူတကွထားပါ! ဒါကစမတ်လမ်းပါ။
အကယ်၍ သင်ဟာကောင်းမွန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေမရှိတဲ့အတွက်မျှတတဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ရင်၊ Plummer ကိုငါအကြံပေးပါမယ်။
ဒါဟာလှပပြီးအံ့သြစရာ faucet ပဲ! ကျွန်တော့်ဇနီးကငါလိုပဲကြိုက်တယ်။ ကျန်တဲ့မီးဖိုချောင်ရေကန်က ၆ နှစ်ပဲကြာတယ်။ ဒီဟာကအများကြီးပိုကြာရှည်မယ်၊ ပိုကောင်းတာပေါ့။
B က *** ဋ2020-07-12
ဤသည်မီးဖိုချောင် faucet နှိမ့်ချကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ထပ်စပျစ်ရည်ကိုဘားစုပ်ခေတ်မီကြည့်ရှုစေသည်။ အဆိုပါ faucet တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၃၆၀ ဒီဂရီလည်ပတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သဖြင့်နစ်မြုပ်တိုင်း၏ထောင့်တိုင်းကိုဆေးကြောနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်လက်ကိုင်လက်ကိုင်တစ်ခုကကျွန်တော့်ဘဝကိုပိုလွယ်ကူစေတယ်။ ငါရေအပူချိန်ကိုထိရောက်စွာချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ ငါပေးဆောင်စျေးနှုန်းအဘို့, ဒီ faucet ထိုက်တန်သည်။
ဒီ faucet ကိုကျွန်ုပ်အိမ်၌တစ်လခန့်တပ်ဆင်ထားပြီးကျွန်တော်တို့၏မီးဖိုချောင်အတွက်ကောင်းမွန်သောအဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ ပူးတွဲပါရှိသည့်ရေပိုက်များသည်တိုတောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သင့်ပါသည်။
F ကို *** တစ်ဦး2020-07-16
အဆိုပါ faucet အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော, လေးလံသော, ခက်ခဲတဲ့, cupreous အတွင်းပိုင်း (အနည်းဆုံးငါတွေ့မြင်နိုင်သည်), ရှည်လျားပျော့ပျောင်းသည်။ ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်ပြissueနာလျှင်ငါ့မှတ်ချက် update ကိုပြန်လာကြလိမ့်မည်။
အကြှနျုပျ၏လှည့်ကွက်: သင်သည်အခြမ်းမှာလက်ကိုင်နှင့်အတူထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ တကယ်တော့ငါရှေ့မှောက်၌လက်ကိုင်နှင့်အတူကြိုက်တတ်တဲ့နှင့်တပ်ဆင်ထားသေးပြproblemနာဘာမျှ။ ငါ့ကို install လုပ်ပေးဖို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ် အမှန်တကယ်တပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာသံချေးနေသောမူလ faucet ကိုတပ်ဆင်ရန်ကိရိယာများမရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ငါ့ faucet အသစ်ကိုငါအရမ်းသဘောကျမိတယ် သူတို့သိတာကနာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေထက်ဒေါ်လာ ၁၃၀ လျော့တယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ တပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိုးရိုးလေးသာဖြစ်ပြီး professional ကိုခေါ်စရာမလိုပါ။ faucet သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဒေါ်လာသန်း ၇၀ အတွက်တိုင်တန်းစရာမလိုပါဘူး။
R ကို *** ခ2020-07-18
ငါဒေါ်လာ ၈၀ လောက်ပေးရတယ် ငါ $ 80 နှင့်ထိုထက်ပိုများအတွက်တူညီ faucets မြင်ကြပြီ။ ငါအဟောင်းကိုထုတ်ဆွဲခြင်းနှင့်နာရီကြာပေမယ့်ဒီ 120 မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်ဒီတော့၌သွား၏။ ညွှန်ကြားချက်များသည်မရေမရာဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်ထက်ပိုပြီးအစားထိုးခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုမလိုအပ်ပါ။ အစာရှောင်ခြင်းပို့ဆောင်ကောင်းတဲ့အလေးချိန်ချိုမြိန်ပုံရသည်!
အီး *** င2020-07-20
ငါသည်ငါ့မီးဖိုချောင် faucet အစားထိုးဖို့ကအသုံးပြုခဲ့သည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ Delta မှပြုလုပ်သော faucet အဟောင်းကိုဆန့်ကျင်သကဲ့သို့လက်ကိုင်တစ်ခုတည်းသည်ရေပူကိုဖြစ်စေ၊ အအေးဖြစ်စေမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရေကိုပိတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရေကိုလက်ကိုင်အနေအထားတွင်သာကိုင်တွယ်မှုဖြင့်ပိတ်ထားသည်။ သင်သည်ရေမှုန်ရေမွှား (သို့) ဖြောင့်သောခလုတ်ကို နှိပ်၍ ခေတ္တရပ်တန့်နိုင်သည်။ သင်ဆေးကြောရန်လွယ်ကူအောင်စုပ်ယူသည့်နေရာတိုင်းတွင်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
အီး *** w2020-07-20
စဉ်းစားကြည့်ပါကဒီဟာကအဖိုးတန်တဲ့ထွက်ကုန်တစ်ခုပါ။ သံမဏိနှင့်ဆင်တူသော brushed nickel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ငါ faucet အကြောင်းကိုကြိုက်တယ်တစ်ခုမှာသင် multi- အသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်အဘို့အဆင်းဆွဲချနိုင်ပါတယ်တစ်ခုတိုးချဲ့ရေပိုက်ရှိပါတယ်။ လက်ကိုင်ဟာအဆင်ပြေပါတယ် ပြွန်ပေါ်တွင်အသုံးပြုကောင်းသောပစ္စည်း။
ဒီဟာကိုလအနည်းငယ်ကြာအောင် install လုပ်ပြီးပြီ။ သူတို့တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ အဟောင်းကိုဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခုကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတပ်ဆင်ခဲ့ပြီးဒီ အချိန်မှစ၍ ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
M က *** ဋ2020-07-22
ငါ့ faucet အသစ်ကိုငါအရမ်းသဘောကျမိတယ် တပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ကိုခေါ်စရာမလိုပါ။ ငါကအကြောင်းအရာအားလုံးကိုချစ်ဆွဲချဖြန်း, အမြင့်, ငါ့ရေဖိအားအဆအဆတိုးမြှင့်! ချက်ပြုတ်တဲ့အခါငါရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူး။ ၎င်းတို့တွင်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်အပေါ်သူတို့၏ယုံကြည်မှုကိုသာသက်သေပြနိုင်သောတိုးချဲ့အာမခံချက်ရှိသည်။
B က *** မင်း2020-07-23
အသုံးတည့်သောညွှန်ကြားချက်များဖြင့်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာမှာအားလုံးညွှန်ကြားချက်ပေးပို့မရပေလိမ့်မည်။ ကြောင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်းမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ faucet ဆိုပါတယ်။
အို *** မီတာ2020-07-24
ဒီမီးဖိုချောင် faucet အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ အရည်အသွေးကလည်းအရမ်းကောင်းတယ်၊ ရေစီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့လွယ်တယ်။ အသုံးပြုရတာအရမ်းအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ငါအရမ်းသဘောကျတယ်။
ငါ faucet ဟောင်းကိုဖျက်သိမ်းဖို့အထူးကိရိယာများမရှိခြင်းကတည်းက install လုပ်ဖို့ရေပိုက်။ ငါဒီ faucet ၏ချောမွေ့စစ်ဆင်ရေးနှင့်အရည်အသွေးကိုချစ်။
တစ်ဦးက *** င2020-07-26
faucet သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာရှိပြီးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကြိုးများကိုချဲ့နိုင်ခြင်းက၎င်းကိုသန့်ရှင်းရေးအတွက်ပိုမိုအသုံးဝင်စေပြီးအသုံးဝင်သည်။ လုပ်သောပစ္စည်းများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ဤအားနည်းချက်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ငါက lovin နေပါတယ်
H ကို *** s ကို2020-07-27
ဒီ faucet ကိုချစ်။ ငါသည်ငါ့မီးဖိုချောင်ကိုပြုပြင်နေပါတယ်နှင့်အသစ်တစ်ခုကို faucet စာရင်းတွင်မြင့်မားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီ faucet ငါရှာနေတာပဲဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်လက်ရှိ faucet ဟာဟောင်းနွမ်းနေပြီ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအစားထိုးဖို့တစ်တန်မသုံးစွဲချင်ဘူး faucets နှင့်လ်တာများနှင့်စျေးကြီးတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းကြီးနှင့်ပိုမိုမြင့်မားစျေးနှုန်းရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးထက်အများကြီးပိုကောင်းကြည့်ရှုသည်။ Install ငါ့ကိုအချိန်အနည်းငယ်ယူ။ , ဒါပေမယ့်ခြုံငုံ, ဒီထုတ်ကုန်နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်။
H ကို *** ဈ2020-07-30
ငါ၏အလိုင်းများတိုးချဲ့ခဲ့ကြပေမယ့်ဟောင်းအိမ်မှာ။ ငါထင်ပြီးတော့ထုတ်ကုန်ပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးကနေအခြားစုပ်ယူရန်ငါဝယ်တ။
M က *** င2020-08-04
ညွှန်ကြားချက်များသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိနိုင်သော်လည်းအချို့သော youtube ဗီဒီယိုများကကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါ့မှာအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဖူးဘူး၊ လိမ်ဖဲ့ခြင်းနဲ့အနက်ရောင်မျက်လုံးရဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ လအနည်းငယ်သုံးပြီးပြissuesနာမရှိဘူး။
W *** ဎ2020-08-07
ငါဒီ faucet နှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်! install လုပ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းတဲ့။ ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ်ဘာမျှစျေးပေါခံစားရသည်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကြည့်ရှု။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ အထူးအကြံပြုလိုတယ်!
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသော၊ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ အရောင်ကဲ့သို့ပင်၊ ကျွန်ုပ်၏မီးဖိုချောင်အတွင်းရှိငါ၏ကြွေပြားနှင့်ကိုက်ညီသည်။
, G *** s ကို2020-08-11
တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းတွင် 3/8 ′ပိုက်ရှိသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ကြိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်ရေချွေတာစက်အသစ်များလုပ်သကဲ့သို့ထုံးသို့မဟုတ်ကယ်လစီယမ်များဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
J ကို *** ဎ2020-08-12
ငါ့မှာမီးဖိုချောင် faucet ဟောင်းရှိတယ်၊ ငါပဲအစားထိုးလိုက်တယ်၊ ငါအရမ်းဒီ faucet ကိုနှစ်သက်တယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တယ်။
J ကို *** s ကို2020-08-15
အံ့သြစရာကြီး။ ငါဒီဇိုင်း, ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် faucet များအတွက်အသုံးပြုမှုခံစားကြိုက်တယ်။ ပက်ဖြန်းအတွက် built ကြီးမြတ်သည် !! ငါသည်လည်းရေဖိအားဟာငါ့ယခင် faucet ထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်သောအများကြီးသတိပြုမိသည်။
B က *** y က2020-08-16
ငါရက်အနည်းငယ်များအတွက် faucet လက်ခံရရှိပါပြီ။ ကျွန်မခင်ပွန်းကမနေ့က install လုပ်တယ်။ အလွန်ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာကောင်းမွန်သောအချက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့၏မီးဖိုချောင်တွင်ဤ faucet ကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ငါတို့ကြိုက်တယ်
, G *** t ကို2020-08-18
ပိုက်ဆံအတွက်အံ့သြစရာ faucet !! ငါတို့အဘို့အဘယ်သူမျှမသွတ်သွင်းပြproblemsနာများ။ အလွန်ကြီးပြီးအရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။
ငါ *** r2020-08-20
ကို C *** င2020-08-22
လွန်ခဲ့သော ၆ လခန့်ကဤရေပိုက်ကွန်ကို ၀ ယ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအလွန်ကျေနပ်အားရ။ ကြည့်ကောင်းသည်
L ကို *** င2020-08-25
ငါမဝယ်ခင်ပြန်လည်သုံးသပ် ပူပြင်းတဲ့လိုင်းဟာငါရှိနေတုန်းထက်တိုတယ်။ ပြproblemနာမရှိပါဘူး၊ Ace မှာ extension ကိုကျွန်တော်တို့ရခဲ့တယ်။ အစားထိုးရန်အလွန်ရိုးရှင်း ကြည့်ကောင်းတယ်၊ စီးဆင်းမှုကခိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ဒီ faucet ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်
V ကို *** s ကို2020-08-27
စျေးနှုန်းအဘို့အကောင်းခြုံငုံထုတ်ကုန်။ အဆိုပါ nozzle ကိုအလွယ်တကူချဆွဲထုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပိုက်သည်ကက်ဘိနက်နံရံနှင့်အလွန်နီးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားသည်။
အီး *** r2020-08-29
ဤအမှတ်တံဆိပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါမှမကြားဖူးသော်လည်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားလုံးအပေါ်တွင် မူတည်၍ ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒီ faucet နှင့်အတူစူပါပျော်ရွှင်ကြသည်။ အရည်အသွေးသည်ကြီးလှသည်၊ ကြည့်ကောင်းသည်၊ ချောချောမွေ့မွေ့ရွေ့လျားသည်၊ စျေးကြီးပြီးထုပ်ပိုးသည်။ အခုကျွန်တော်တို့မှာတစ်လလောက်ရှိပြီ၊ မပျော်တော့ဘူး။
W *** မီတာ2020-09-02
ငါ့မီးဖိုချောင် faucet ဟောင်းကိုအစားထိုးဖို့လိုတယ်၊ ဒါကအကောင်းဆုံးလို့ငါထင်တယ်။ ကျွန်တော့်အဟောင်းအတွက်အပေါက်သုံးပေါက်ပါရှိပါတယ်။ ထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းကိုညွှန်ကြားရန် wowow စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိသည်။ တပ်ဆင်ပြီးစီးရန် ၁၅ မိနစ်သာလိုတော့သည်။ ရေစီးဆင်းမှုသည်အမှန်တကယ်ချောမွေ့ပြီးခိုင်မာသည်။
ငါအရမ်းဇီဇာကြိုက်တယ်, သုတေသနတွေအများကြီးလုပ်။ နာမည်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အနိမ့်ဘယ်တော့မှနိမ့်ဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ကိုရှာဖွေလေ့ရှိပါတယ်, ဤအရပ်မှငါလူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ငါ၏စာရင်းထဲသို့ဤအမည်မသိ -to- ငါ့ကိုအမှတ်တံဆိပ်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီအချို့တော်တော်လေးစေ့စေ့စပ်စပ်သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့တယ် အလားတူဒီဇိုင်းကိုကုန်ကျစရိတ်ထက်နှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆပိုများသည်။ အခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှစ်ခု - ၁။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအနည်းငယ်တွင်ဖော်ပြပါအချက်များကပြန်လည်ဆွဲယူခြင်းသည်ပြန်လည်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်နေရာချထားခြင်းမရှိပဲဘယ်ဘက်ယိမ်းယိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည် ဒါကတကယ်တော့ installation ပြissueနာပါ။ ချိန်ညှိရန်လိုအပ်သောအလေးချိန်သည်လွယ်ကူပြီး၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၂။ အရောင် - ဓာတ်ပုံများသည်၎င်းသည် brushed stainless steel gray အရောင်နှင့် ပို၍ ပြသခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းကို brushed nickel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ ၎င်းသည်ငါပူနွေး။ အညိုရောင်အရောင်ရှိနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏ SS appliances နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ထိုရှုထောင့်နှင့်မေးခွန်းများတွင်ပါ ၀ င်သည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးအညိုရောင်အရောင်မရှိသော၊ သံမဏိအသုံးအဆောင်များနှင့်အဆင်ပြေစွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်းစသည်တို့ကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ဒါကအကြံဥာဏ်ကောင်းပါ။ ကျွန်တော့်မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အချိန်ယူခဲ့ကြသောသူများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်စိတ်မပျက်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်ခိုင်မာသောအရည်အသွေးရှိသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆွဲချခြင်းနှင့်ရေမှုန်ရေမွှားပါ ၀ င်သည့်ဒီဇိုင်းသည်အံ့သြစရာကောင်းလှသည်။ ကျွန်ုပ်၏နစ်မြုပ်မှုသည်မည်သည့်အခါမျှသန့်ရှင်းမှုမရှိခဲ့ပါ။ ငါမပြောနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာအသက်ရှည်ခြင်းဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာတစ်လသာရှိသောကြောင့်၊ မီးဖိုချောင် faucets အများစုသည်၎င်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုနေသောကြောင့်၎င်းသည်စျေးကြီးသည့်တံဆိပ်များနှင့်မတူနိုင်ဟုငါထင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု၊ ရှာရန်၊ ဒေါ်လာကိုသိမ်းပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကြယ် ၅ ပွင့်နှင့်အတူအကြံပြုလိုသည်။
H ကို *** ဎ2020-09-15
ကျွန်ုပ်၏မူလသုံးသပ်ချက်အရဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်အားဆက်သွယ်ပြီး WOWOW ပြန်လာသည့် ၀ င်းဒိုးကိုကျော်လွန်သွားသော်လည်းမှားယွင်းသော faucet ကိုအစားထိုးနိုင်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ငါ faucet ကိုပြင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကပထမတစ်ခုကိုမပြင်နိုင်ရင်သူတို့ကအစားထိုးပို့ပေးတယ်။ ပြhandleနာကအတွင်းပိုင်းလက်ကိုင်ယန္တရားကလက်ကိုင်ကိုဘေးတိုက်ရွေ့လျားစေပြီးအပူချိန်ကိုထိန်းညှိနိုင်ပေမယ့်ရေစီးဆင်းမှုကိုဖွင့်ဖို့အထက်နဲ့အောက်မထားဘူး။ အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းကိုသီးခြားခွဲ ထား၍ ပြန်လည်နေရာချထားရန်လိုအပ်သည်။ faucet သည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းယခုအလုပ်လုပ်သည်။ ကြည့်ခြင်းသည်ငါလိုချင်သောအတိအကျဖြစ်သည်။ ဤကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကြယ် ၅ ပွင့်!
မူရင်း - ဒီ faucet ကလှတယ်၊ စျေးလည်းမှန်တယ်၊ ကံမကောင်းပါဘူး၊ ရေမရှိဘူး ပူ / အအေးကိုပြောင်းရန်လက်ကိုင်သည်တစ်ဖက်ဖက်သို့ရွေ့လျားသော်လည်း faucet ကိုဖွင့်ရန်အပေါ်နှင့်အောက်သို့ရွေ့ခြင်းမရှိပါ။ ငါရေမရှိနှင့်ပတ်သက်။ အခြားမှတ်ချက်များနှင့်မေးခွန်းများကိုမြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ငါကအချို့သောပစ္စည်းများအပေါ်စည်းဝေးပွဲကိုပြissueနာဖြစ်နိုင်သည်ထင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်မှုများအားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ချိတ်ဆက်ပြီး supply line valves တွေဖွင့်ထားတယ်။ ရေပေါ်ရှိပြီးရရှိနိုင်ကြောင်းထပ်ဆင့်အထောက်အထားအဖြစ်ငါ faucet ပြတ်တောက်ပြီးနောက်ရေပိုက်များထဲကရေယိုသတိပြုမိသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ် ၀ ယ်ခဲ့သောကျွန်ုပ်၏အခန်းခန်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် ၀ ယ်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤလှပသော faucet ကိုအသုံးမပြုနိုင်သောကြောင့်အလွန်စိတ်ပျက်မိပါသည်။ ယခုပြန်လာသည့်ပြတင်းပေါက်ကုန်ဆုံးသွားသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေသည်။
S က *** y က2020-09-18
ကျွန်ုပ်တို့၏မီးဖိုချောင်ရေလောင်းပိုက်သည်မကြာသေးမီကကွယ်လွန်သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့အားအစားထိုးအဖြစ်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြန်မီးဖိုချောင်ရေစုပ်ဖြင့်ပြန်လည်စတင်နိုင်သည်။ သို့သော် box ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ faucet ၏ပင်မအစိတ်အပိုင်းတွင်အပြီးသတ်ကြီးမားသောခြစ်ရာကိုသတိပြုမိလိုက်သည်။ ဒါကသေချာပေါက် QC ပြissueနာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခြစ်ရာကနောက်ဆုံးမှာသံချေးသွားမှာပါ၊ ဒါကတကယ်ဆိုးတယ်လို့မပြောချင်ပါဘူး။ ငါတို့ကအရမ်းစိတ်ပျက်သွားတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကမီးဖိုချောင်ရေကန်ကိုနောက်တစ်ခုထပ်မရသေးခင်အထိအသုံးမပြုတော့လို့ပဲ။ ဒါကကြီးမားတဲ့အဆင်မပြေမှုပါ။ ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းမပြုလုပ်မီအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေစဉ်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်မယုံနိုင်ပါ! ငါတို့တကယ်ဒီမီးဖိုချောင် faucet တပ်ဆင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နစ်မြုပ်တက်နောက်တဖန်အပြေးရှိခြင်းမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်အလွန်စိတ်ပျက်!
UPDATE - ကျွန်ုပ်တို့၏ကန ဦး ပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအကောင်းဆုံးဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ကြယ်တစ်ပွင့်မှကြယ် ၅ ပွင့်မှကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ WOWOW သည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှမဆိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောအကောင်းဆုံးဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရောက်ရှိလာသည့် DHL kurier မှတစ်ဆင့်ချောချောမွေ့မွေ့ဆေးသယ်ဆောင်သောပိုက်ကိုသေးငယ်။ ကုန်းပတ်ပြားသေးသေး၊ DHL မှတစ်ဆင့်တရုတ်မှပေးပို့ခဲ့သည်။ ငါတို့ faucet ကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့ငါတို့တကယ်ကြိုက်တယ်၊ ကြည့်ကောင်းတယ်၊ လှလှပပအလုပ်လုပ်တယ်။ ဤတွင် ထပ်မံ၍ WOWOW သည်ဤအခြေအနေကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အထက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအလွန်သဘောကျခဲ့သည်။
Z ကို *** တစ်ဦး2020-09-22
ဒီ faucet သည် 15 နှစ်အရွယ် "အမှတ်တံဆိပ်" တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်ယူနစ်ကိုဆွဲချပြီးရေမှုန်ရေမွှားခေါင်းနှင့်အစားထိုးသည်။ ဒီ faucet ကို faucet ကိုယ်ထည်ရှိအဆို့ရှင်အစုအစည်းများမှာစတင်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးအဲ့တာတွေကိုပြုပြင်ရန်ကျွန်တော်မကြိုးစားခဲ့ပါ။ ယူနစ်ဟောင်းမှ…ချေးခြင်းနှင့်ချည်ထားသောချည်များကိုထုတ်ယူခြင်း ၂.၅ - ၃ နာရီအပြီးတွင်အလုပ်၏ဤအပိုင်းကိုမဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ဒါကနှင့်အဟောင်းယူနစ်၏ယုတ်ညံ့စက်မှုဒီဇိုင်းကိုငါ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်သွေး, ချွေးနှင့်မျက်ရည်အများကြီးအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် faucet အသစ်အား ၃၅ မိနစ်ခန့်တွင်စမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အပူနှင့်အအေးပေးမှုနှစ်ခုအတွက်ချည်ဆက်သွယ်မှုနှင့် interface ကိုနစ်မြုပ်ရန် faucet များအတွက်ကြီးမားသော threaded ဆက်သွယ်မှု ... voila, ပြီးပြီ။
အပူနှင့်အအေးပေးသောဆက်သွယ်မှုများတွင် Teflon တံဆိပ်ကပ်တိပ်ကိုသေချာသေချာထည့်ပါ။ ထုပ်ပိုးမှာမပါပါဘူး သန္ဓေသားကျောင်းတွင်မည်သည့် ဦး နှောက်မှေးမှိန်သွားစေနိုင်သည့်အင်္ဂလိပ်စကားသို့ပြင်ပမွန်ဘာသာပြန်ဆိုပုံရသည့်ဗားရှင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဥပမာ -“ တပ်ဆင်ပြီးစီးမှုနှင့်စစ်ဆေးမှုယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ” ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာမှာသရုပ်ဖော်ပုံများသည်နှုတ်ဖြင့်ပါ ၀ င်သောအရာများအလွန်အကျွံလုပ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း…။
အရာအားလုံးထုပ်ပိုးတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည် (တံဆိပ်ခတ်တိပ်မှလွဲ။ ); ပူပြင်း / အအေးဆက်သွယ်မှုများအတွက် escutcheon ပြား၊ အပို gaskets, allen လိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့် 3/8 to 1/2 adapters (လိုအပ်လျှင်)
ထိုအရာများအပြီးတွင် faucet အသစ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးယခင်ပုံစံဟောင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါကအရမ်းအကြံပြုလိုတယ်၊ ဈေးနှုန်းက ၇၅ ဒေါ်လာကနေ ၁၀၀ - ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ညီမျှတယ်။ ဒီဟာကိုသူကအစားထိုးလိုက်တာကြာရှည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရမ်းကျေနပ်မိလိမ့်မယ်။
B က *** င2020-09-24
ငါ့ faucet အသစ်ကိုငါအရမ်းသဘောကျမိတယ် ငါအလွန်အမင်းလိုအပ်နေခဲ့သည်နှင့် faucets အကြောင်းကိုဘာမျှမသိ, လက်တစ်ဆုပ်စာကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏။ ကျွန်ုပ်၏သုတေသနတွင် WOWOW ကိုတွေ့ရှိပြီးပြန်လည်သုံးသပ်မှုအားလုံးသည်ထူးခြားသည်။ သူတို့သိတာကနာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေထက်ဒေါ်လာ ၁၀၀ လျော့နည်းတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ တပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ကိုခေါ်စရာမလိုပါ။ ငါခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကြိုက်တယ်, ချဆွဲမှုန်ရေမွှား, အမြင့်နှင့်ငါ့ရေဖိအားအဆတိုးမြှင့်! ငါချက်ပြုတ်သောအခါငါရှုပ်ထွေးသောကြီးမားစေလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအားလုံးကိုအပြည့်အဝလွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး! Home Depot ကိုရောင်းချပြီး ၄ ရက်အကြာမှာကျွန်ုပ်၏ faucet အသစ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ငါကြည့်ဖို့တောင်မစုံစမ်းခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ကအစ, သူတို့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်အပေါ်၎င်းတို့၏ယုံကြည်မှုသက်သေပြသည့်တိုးချဲ့အာမခံရှိသည်။
WOWOW တစ်ကြိမ်တည်းသောဆေးထုတ်စက်မီးဖိုချောင်သုံး ...